Análisis básicos de Twitter: Amathuluzi wamahhala, ama-Excel Cheats, namaThere angaphakathi
¿Ingabe i-Twitter ifile? Cishe cha.
2 I-2 Okunye Okuya Ku-Twitter Ukuhlaziya
Kunolwazi oluningi ongaluthola kudeshibhodi, njengokubuka, izinga lokuzibandakanya, ukuchofoza kwezixhumanisi, njll Kodwa, ngaphambi kwalokho, udinga ukuqonda incazelo yemetrikhi ngayinye ukwenza nayyonhoonkongojayenjouonkayenjoukenjayenjayon.
Uma umkhankaso wakho we-Twitter ukwandisa okuvelayo, kufanele ubheke leyo métrica etile futhi uthole indlela engcono kakhulu yokuthuthukisa okuvelayo. Bheka iso métrica ngayinye bese uqhathanisa imininingwane nezinyanga ezedlule. Uyokwazi uma wenza izinto kahle ngoba uzobona ukwanda okuqhubekayo.
Phakathi no-marzo de 2015, I-Twitter iqalise ikhasi eliyisiqalo le-akhawunti. Leli khasi likulondoloza isikhathi esiningi ngokukunikeza isifinyezo senyanga somsebenzi wakho we-Twitter.
Uma i-Twitter analítico iyingxenye yolwazi olwedlule, ake sikuzame namuhla. Gxila ku-metric futhi uthuthuke lapho. Kungenza umthelela omuhle ngokuhamba kwesikhathi.
ONG-27 de mayo, i-2015, i-Twitter ithuthukise ukuhlaziywa kwayo Abalaleli Ukuqonda. Lesi sici sinokuqhekeka okuningana kwemininingwane yokuthakaselwa kwabalandeli bakho okufana ne-Demographics, Indlela Yokuphila, I-Mobile Footprint, njll.
Lokhu kuhle ebhizinisini, ngoba manje uyakwazi ukuqhathanisa abalandeli be-organic nabasebenzisi be-Twitter. Okwamanje, abasebenzisi base-Estados Unidos kuphela abalandelwayo. Ungenza isifundo sokuqhathanisa phakathi kwabalandeli bakho nabanye abasebenzisi be-Twitter.
I-2 Okunye Okuya Ku-Twitter Ukuhlaziya
Amapulatifomu nazi we-3 engathola ukuthi kufanelekile futhi kulula kubaqalayo ukusebenzisa.
Ngokuvamile, labo abathanda ukwenza izinto ngokwabo bazokwazi ukuqonda kangcono le datha. Lokhu akuwona umsebenzi onzima. Udinga nje ukuthekelisa idatha kusuka ku-Twitter ukuhlaziya kanye ne-Excel hoja de cálculo.
I-2 Yenza idatha yakho ibe yithebula enezihloko
I-3. Sebenzisa umsebenzi we-Excel IZQUIERDA ukuphuma nosuku kukholomu entsha
IZQUIERDA ([@ isikhathi], 10) ukuphuma nosuku
I-4. Sebenzisa umsebenzi we-Excel TEXTO ukuguqula usuku ube yiviki kukholomu entsha
TEXTO (E2, "ddd") ukubuyela ngosuku lweviki
Uma i-LEFT ([@ umbhalo we-Tweet], i-1 = = "@ @", "impendulo", "estándar")
I-Followerwonk umkhiqizo owenziwe yiMoz. Izokunika idatha mayelana nabalandeli bakho be-Twitter, indawo nicho. Ukuze usebenzise, ​​kufanele ungene ngemvume usebenzisa i-akhawunti yakho ye-Twitter. Ikhululekile ukuyisebenzisa.
Osnovna Twitter Analytics: Amathuluzi wamahhala, ama-Excel Cheats, namaThere angaphakathi
Основна Twitter Analytics: Amathuluzi wamahhala, ama-Excel Cheats, namaThere angaphakathi
Mga Pangunahing Kaalaman sa Twitter: Amathuluzi wamahhala, ama-Excel Cheats, pangalanThere angaphakathi
การวิเคราะห์ Twitter ขั้นพื้นฐาน: Amathuluzi wamahhala, กลโกง ama-Excel, ประเทศญี่ปุ่นมี angaphakathi